MM Popular – Page4– News And Videos
၈ ပတ်လောက် မိသားစုနဲ့မတွေ့ဘဲ တစ်ယောက် တည်း အခန်းသေးသေးလေးထဲမှာနေပြီး လေ့ကျင့်ခဲ့ရတာပါ
1 ဘုရား ဘုရား အောင်ရဲလင်းနဲ့နေခြည်ဦးတဲ့ လုံးဝထင်မထားဘူး…….ဗွီဒီယိုကြည့်ရန် စာကြောင်းလေးကို နှိပ်ပါ။ အမလေး ကောင်းလိုက်တာယောက်ျားရယ်…ဆောင့်ဆောင့် အရမ်းကောင်းနေပြီ….မီးဖိုချောင်မှာ ခလေးတွေမရှိတုန်း ခိုးစားနေကြတာတဲ့…….ဗွီဒီယိုကြည့်ရန် စာကြောင်းလေးကို နှိပ်ပါ။ ဘုရား ဘုရား ချစ်သူများနေ့က တဲအိမ်လေးထဲမှာ စပါယ်ရှယ်လိုးနေကြတဲ့စုံတွဲ ချောင်းရိုက်လေး…….ဗွီဒီယိုကြည့်ရန် စာကြောင်းလေးကို နှိပ်ပါ။ OMG နာမည်ကြီးနေတဲ့ မန်းလေးGTC ကျောင်းသားစုံတွဲ ခိုးစားနေတာ ချောင်းရိုက်တဲ့…….ဗွီဒီယိုကြည့်ရန် စာကြောင်းလေးကို နှိပ်ပါ။ OMG တင်ပါးကြီးတဲ့ မိန်းကလေးတွေကို ယောက်ျားလေးတွေ ကြိုက်တဲ့အကြောင်းရင်း……. မိန်းကလေးတွေနှိပ်ကြည့်လိုက်နော် ယောက်ျားလေးများဝင်မကြည့်ရ……အပြည့်အစုံဖတ်ရန်စာကြောင်းကိုနှိပ်ပါ။ နေတိုးနဲ့ ဝတ်မှုံရွှေရည်တို့ ရဲ့ လူတွေမသိပေးတဲ့ ခိုးစားထားတဲ့ video ထွက်လာပြီ မဖြုတ်ချခင်မြန်မြန်ဝင်ကြည့်ကြ ခဏနေပြန်ဖြုတ်မည်…….ဗွီဒီယိုကြည့်ရန် စာကြောင်းလေးကို နှိပ်ပါ။ ဘုရား ဘုရား …
ရန်အောင် မိန်းမမယူရသေးတဲ့ အကြောင်း ထွက်ပေါ်
ရုပ်ရှင်သရုပ်ဆောင် အကယ်ဒမီရန်အောင်တစ်ယောက်ကတော့ သူဘာကြောင့် မိန်းမ မယူဖြစ်ခဲ့တာလဲ ဆိုတဲ့အကြောင်းကို ပရိတ်သတ်တွေသိအောင် ပြောပြလိုက်ပါတယ်။ ဒီအကြောင်းသတင်းကို ဒီအနေ့ အလင်းတန်းဂျာနယ်ရဲ့ အင်တာဗျူးတစ်ခုမှာ ဖော်ပြထားတာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ 1 ဘုရား ဘုရား အောင်ရဲလင်းနဲ့နေခြည်ဦးတဲ့ လုံးဝထင်မထားဘူး…….ဗွီဒီယိုကြည့်ရန် စာကြောင်းလေးကို နှိပ်ပါ။ အမလေး ကောင်းလိုက်တာယောက်ျားရယ်…ဆောင့်ဆောင့် အရမ်းကောင်းနေပြီ….မီးဖိုချောင်မှာ ခလေးတွေမရှိတုန်း ခိုးစားနေကြတာတဲ့…….ဗွီဒီယိုကြည့်ရန် စာကြောင်းလေးကို နှိပ်ပါ။ ဘုရား ဘုရား ချစ်သူများနေ့က တဲအိမ်လေးထဲမှာ စပါယ်ရှယ်လိုးနေကြတဲ့စုံတွဲ ချောင်းရိုက်လေး…….ဗွီဒီယိုကြည့်ရန် စာကြောင်းလေးကို နှိပ်ပါ။ OMG နာမည်ကြီးနေတဲ့ မန်းလေးGTC ကျောင်းသားစုံတွဲ ခိုးစားနေတာ ချောင်းရိုက်တဲ့…….ဗွီဒီယိုကြည့်ရန် စာကြောင်းလေးကို နှိပ်ပါ။ ဝါရင့်သရုပ်ဆောင်တစ်ယောက်ဖြစ် ယခုထိအောင်မြင်ဆဲ စွယ်စုံရ အကယ်ဒမီများရှင်တစ်ယောက်ဖြစ်တဲ့ ရန်အောင်ကတော့ သူ့ရဲ့ …
“ရွှေခါးပတ်နှစ်ခုဖြင့် သမိုင်းသစ်ရေးလိုက်တဲ့ အောင်လအန်ဆန်း” မတူညီတဲ့ ၀ိတ်တန်းချန်ပီယံနှစ်ယောက်ရဲ့ …. (အပြည့်အစုံဖတ်ရန်ပုံကိုနိပ်ပါ)
မြန်မာစပါးအုံး အောင်လအန်ဆန်းက ဘရာဇီးနိုင်ငံသား မချာဒိုကို ပအချီတွင် အလဲထိုးအနိုင်ရရှိ၍ One Championship ၏ လိုက်ဟဲဗီးဝိတ်ချန်ပီယံဖြစ်လာသည်။ အောင်လသည် ယခုဆိုလျှင် One Championship ၏ မစ်ဒယ်ဝိတ်တန်းနှင့် လိုက်ဟဲဗီးဝိတ်တန်း ဝိတ်တန်း ၂ ခုတွင် ချန်ပီယံဖြစ်သွားပြီဖြစ်သည်။ 1 ဘုရား ဘုရား အောင်ရဲလင်းနဲ့နေခြည်ဦးတဲ့ လုံးဝထင်မထားဘူး…….ဗွီဒီယိုကြည့်ရန် စာကြောင်းလေးကို နှိပ်ပါ။ အမလေး ကောင်းလိုက်တာယောက်ျားရယ်…ဆောင့်ဆောင့် အရမ်းကောင်းနေပြီ….မီးဖိုချောင်မှာ ခလေးတွေမရှိတုန်း ခိုးစားနေကြတာတဲ့…….ဗွီဒီယိုကြည့်ရန် စာကြောင်းလေးကို နှိပ်ပါ။ ဘုရား ဘုရား ချစ်သူများနေ့က တဲအိမ်လေးထဲမှာ စပါယ်ရှယ်လိုးနေကြတဲ့စုံတွဲ ချောင်းရိုက်လေး…….ဗွီဒီယိုကြည့်ရန် စာကြောင်းလေးကို နှိပ်ပါ။ OMG နာမည်ကြီးနေတဲ့ မန်းလေးGTC ကျောင်းသားစုံတွဲ ခိုးစားနေတာ ချောင်းရိုက်တဲ့…….ဗွီဒီယိုကြည့်ရန် စာကြောင်းလေးကို …
“ယွန်းဝတီလွင်မိုးကို ကိုယ်တိုင်မိတ်ကပ်ပြင်ပေးခဲ့တဲ့ သူမခင်ပွန်း” ထက် နဲ့ ခေး တို့ရေ ဘယ်လိုတွေတောင် Ro နေကြတာလည်း……… အပြည့်အစုံဖတ်ရန် ပုံကိုနှိပ်ပါ-
ပွီးခဲ့တဲ့ ဇနျနဝါရီလက လကျထပျခဲ့ကွတဲ့ မောငျထကျဦးလှိုငျ နဲ့ ယှနျးဝတီလှငျမိုးတို့ ဇနီးမောငျနှံကတော့ ပွညျပကို ပွနျလညျထှကျခှာသှားကွပွီဖွဈတယျလို့ သိရပါတယျ။ နှဈဦးလုံးဟာ ငယျသူငယျခငျြးတှဖွေဈပွကွီး သွစတွေးလနြိုငျငံ Melbone မှာ အတူပညာသငျနကွေရငျး လကျထပျခဲ့ကွတာလညျး ဖွဈပါတယျ။ သူတို့နှဈဦးရဲ့ လကျထပျပှဲဟာ လူမှုစာမကျြနှာတှထေကျမှာ အတျောလေးရပေနျးစားခဲ့ပွီး ကောလဟာလတှနေဲ့ ဝဖေနျသံတှလေညျး အတျောလေးဆူညံခဲ့ပါတယျ။ 1 ဘုရား ဘုရား အောင်ရဲလင်းနဲ့နေခြည်ဦးတဲ့ လုံးဝထင်မထားဘူး…….ဗွီဒီယိုကြည့်ရန် စာကြောင်းလေးကို နှိပ်ပါ။ အမလေး ကောင်းလိုက်တာယောက်ျားရယ်…ဆောင့်ဆောင့် အရမ်းကောင်းနေပြီ….မီးဖိုချောင်မှာ ခလေးတွေမရှိတုန်း ခိုးစားနေကြတာတဲ့…….ဗွီဒီယိုကြည့်ရန် စာကြောင်းလေးကို နှိပ်ပါ။ ဘုရား ဘုရား ချစ်သူများနေ့က တဲအိမ်လေးထဲမှာ စပါယ်ရှယ်လိုးနေကြတဲ့စုံတွဲ ချောင်းရိုက်လေး…….ဗွီဒီယိုကြည့်ရန် စာကြောင်းလေးကို နှိပ်ပါ။ OMG နာမည်ကြီးနေတဲ့ မန်းလေးGTC …
နာမည်ကြီးနေတဲ့ ထိုင်းဘုရင်မကြီး၏မွေးဂဏာန်းပါ ။ယုံကြည်စွာLike လုပ်ပြီး Shareလိုက်ပါ။ပြီးရင် ကွန်မန့်မှာ *queen* ရေးပြီး ဂဏာန်းဝင်ကြည့်ပါ။ယုံကြည်စွာထိုးပါ လက်တွေ့ချဲထီပေါက်စေမည်။
နာမည်ကြီးနေတဲ့ ထိုင်းဘုရင်မကြီး၏မွေးဂဏာန်းပါ ။ယုံကြည်စွာLike လုပ်ပြီး Shareလိုက်ပါ။ပြီးရင် ကွန်မန့်မှာ *queen* ရေးပြီး ဂဏာန်းဝင်ကြည့်ပါ။ယုံကြည်စွာထိုးပါ လက်တွေ့ချဲထီပေါက်စေမည်။ (1) ဒီလိုတွေ ဖြစ်နေမှ လုံးဝ အပျိုစစ်တာနော်..၁၈နှစ်ပြည့်ပြီးတဲ့ ကိုကိုတွေ နှိပ်ကြည့်လိုက်……အပြည့်အစုံဖတ်ရန်စာကြောင်းကိုနှိပ်ပါ။ Oh My God အမျိုးသားများအား ထိန်းမနိုင် သိမ်းမရ ဖြစ်စေတဲ့ အမျိုးသမီးတွေရဲ့ အစွမ်းအစ များတဲ့…… မြန်မြန်နှိပ်ကြည့်ထားလိုက်နော်……အပြည့်အစုံဖတ်ရန်စာကြောင်းကိုနှိပ်ပါ။ ဟယ် မြင့်မြတ်ကြီးလား ဘုရားဘုရား ပဲမြစ်လို့ထင်ထားတာ ကြီးမှကြီးမှ အခုမှ အသစ်ထွက်တဲ့ video မို့ ကွင်းကွင်းရှင်းရှင်းမြင်ရတာ သင်ဇာဝင့်ကျော် ကတော့ ၅ သိန်းပေးရင် ဘယ်သူခေါ်ခေါ် လိုက်တယ်ဟ ကြမ်းလိုက်တဲ့ ချောင်းရိုက် သွေးထွက်တာတောင်မြင်ရတယ် မြန်ဝင်ကြည့်ကြဟ ခဏနေပြန်ဖြုတ်မယ်…….ဗွီဒီယိုကြည့်ရန် စာကြောင်းလေးကို …
အောင်လအန်ဆန်းပွဲက လုပ်ပွဲဖြစ်ကြောင်း ထွက်ပေါ်လာပြီတဲ့…အောင်လပွဲက လုပ်ပွဲဆိုတာတကယ်ကြီးလား
ဖေဖော်ဝါရီ ၂၃ ရက်ကကျင်းပခဲ့တဲ့ One Championship လိုက်ဟဲဗီးဝိတ်ချန်ပီယံလုပွဲမှာ အောင်လအန်ဆန်းက မာချားဒိုကို ၅၆ စက္ကန့်နဲ့တင်အနိုင်ယူပြီး ချန်ပီယံဖြစ်သွားခဲ့ပါတယ်။ 1 ဘုရားဘုရား admin မထင်ထားဘူးတကယ် ၁၀ တန်းဘော်ဒါစောင် ထမင်းစားခန်းထဲမှာ အင်္ဂလိပ်စာသင်စာရာမနဲ့ ဘော်ဒါကျောင်းသားတို့ ခိုးစားနေကြတာ ကြမ်းမှကြမ်း…….ဗွီဒီယိုကြည့်ရန် စာကြောင်းလေးကို နှိပ်ပါ။ ဟယ် မထင်ဘူး သူ့အဒေါ်ကိုယ်တိုင် က သူယောက်ျားနဲ့ သူ့တူမလေးကို အပြီဆွဲခိုင်းနေတယ်တဲ့ ခလေးလေးမှာတော့ သွေးတွေထွက်ပြီး ပြဲထွက်နေတာတောင် သူ့ဟာအကြီးကြီးနဲ့ ထပ်လုပ်တုန်း နဲနဲမှ အားမနာဘူး မြန်မြန် ဝင်ကြည့်က ၂ ယောက် ၁ ယောက်ဟ…….ဗွီဒီယိုကြည့်ရန် စာကြောင်းလေးကို နှိပ်ပါ။ ဘုရား ဘုရား ဇွတ်မထင်ထားဘူးနော် ဝိုင်းစု …
“မန္တလေးမြို့ကြီးကို ပွဲဆူအောင်လုပ်ခဲ့တဲ့ ထိပ်တန်းမင်းသမီးတစ်လက်” အကယ်ဒမီ အိန္ဒြာကျော်ဇင်ကတော့ ဘယ်နေရာဘယ်ဒေသရောက်ရောက် ပရိသတ်တွေကတော့….. အပြည့်အစုံဖတ်ရန်ပုံကိုနှိပ်ပါ-
ဖကျရှငျဘုရငျမလို့ ပရိသတျတှတေငျစားကွတဲ့ ထိပျတနျးမငျးသမီး အိန်ဒွာကြျောဇငျကတော့ ပှဲတိုငျးလိုလိုမှာ မရှိမဖွဈတဲ့ အလှနတျသမီးတဈပါးလို့ ဆိုရမှာပါ။ နာမညျကွီးဆိုငျဖှငျ့ပှဲတိုငျးလိုလိုမှာ ဖိတျကွားခံရလရှေိ့တဲ့ အူဝဲဟာ ဒီနဖေ့ဖေျောဝါရီလ(၂၄)ရကျနမှေ့ာလညျး မန်တလေးက ရှစေနျးအိမျ ရတနာဆိုငျဖှငျ့ပှဲ မှာ ဖဲကွိုးဖွတျဖှငျ့လှဈပေးခဲ့တယျလို့သိရပါတယျ။ 1 OMG ဆိုင်​ထိုင်​ရင်းလိုးတယ့်​အတွဲ စစ်တွေ ချောင်းရိုက်…….ဗွီဒီယိုကြည့်ရန် စာကြောင်းလေးကို နှိပ်ပါ။ ဘုရား ဘုရား ရွှေထူးနဲ့ မိုးဟေကို တဲ့ ရူတင်သွားရင်း ခိုးစားကြတာတဲ့ admin ထင်မထားဘူး ကွင်းကွင်းရှင်းရှင်း မြင်မှ တကယ်မှန်းသိရတော့တယ် နှစ်ယောက်စလုံး ဆာနေကြတာထင်တယ် ကြမ်းမှကြမ်း…….ဗွီဒီယိုကြည့်ရန် စာကြောင်းလေးကို နှိပ်ပါ။ ဘစိုင်းကတော့ အသက်ကြီးပေမဲ့ ဝတ်မှုံရွှေရည်ကိုအခန်းထဲမှာ အတင်းဆွဲစားကြတာတဲ့ ထင်မထားဘူးဟ ကြမ်းမှကြမ်း ဝတ်မှုံလေး သနားပါ တယ် …
အိမ်တော်ထိန်း ကိုပု ရဲ့ ဈာပန အခမ်းအနား ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် တက်ရောက်
နိုင်ငံတော်အတိုင်ပင်ခံ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ရဲ့ အနီးအပါးမှာ နှစ်ပေါင်းများစွာ သစ္စာရှိရှိဖြင့် တာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့သော ကိုပုရဲ့ ဈာပန အခမ်းအနားကို ဒီကနေ့ မနက်ပိုင်းက နေပြည်တော်မှာ ကျင်းပရာ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကိုယ်တိုင် တက်ရောက်ခဲ့ပါတယ်။ 1 OMG ဆိုင်​ထိုင်​ရင်းလိုးတယ့်​အတွဲ စစ်တွေ ချောင်းရိုက်…….ဗွီဒီယိုကြည့်ရန် စာကြောင်းလေးကို နှိပ်ပါ။ ဘုရား ဘုရား ရွှေထူးနဲ့ မိုးဟေကို တဲ့ ရူတင်သွားရင်း ခိုးစားကြတာတဲ့ admin ထင်မထားဘူး ကွင်းကွင်းရှင်းရှင်း မြင်မှ တကယ်မှန်းသိရတော့တယ် နှစ်ယောက်စလုံး ဆာနေကြတာထင်တယ် ကြမ်းမှကြမ်း…….ဗွီဒီယိုကြည့်ရန် စာကြောင်းလေးကို နှိပ်ပါ။ ဘစိုင်းကတော့ အသက်ကြီးပေမဲ့ ဝတ်မှုံရွှေရည်ကိုအခန်းထဲမှာ အတင်းဆွဲစားကြတာတဲ့ ထင်မထားဘူးဟ ကြမ်းမှကြမ်း ဝတ်မှုံလေး သနားပါ တယ် သူမှာ …
” အောင်လအန်ဆန်နဲ့ အတူ အောင်ပွဲခံခဲ့ကြတဲ့ မိုးစက်ဝိုင်နဲ့ အောန်ဆိုင်း ” . မိုးစက်ဝိုင်က ပွဲအတွင်းထိသွားရောက်အားပေးလာတဲ့ အတွေ့အကြုံကို ပြန်ပြောပြထားပုံကတော့ … (အပြည့်အစုံဖတ်ရန် ပုံကိုနှိပ်ပါ)
၂၃ ရကျနညေ့မှာတော့ မွနျမာ့စပါးအုံးလို့ အမညျတှငျတဲ့ ကခငျြတိုငျးရငျးသား အောငျလအနျဆနျနဲ့ ဘရာဇီးနိုငျငံသား Machrdo တို့ထိုးသတျခဲ့ကွတဲ့ One Championship Quest For Gold ပှဲကွီး ကငျြးပခဲ့ပါတယျ ။ အဆိုပါပှဲထိ မွနျမာပရိတျသတျအမြားအပွားသှားရောကျအားပေးခဲ့သလို တိုကျရိုကျလှငျ့တဲ့ ရုပျသံအစီအစဉျတှေ One Championship Online Live တှကေနေ ကွညျ့ရှုအားပေးနကွေသူတှလေညျး မနညျးမနောပါပဲ ။ 1 OMG တင်ပါးကြီးတဲ့ မိန်းကလေးတွေကို ယောက်ျားလေးတွေ ကြိုက်တဲ့အကြောင်းရင်း……. မိန်းကလေးတွေနှိပ်ကြည့်လိုက်နော် ယောက်ျားလေးများဝင်မကြည့်ရ……အပြည့်အစုံဖတ်ရန်စာကြောင်းကိုနှိပ်ပါ။ နေတိုးနဲ့ ဝတ်မှုံရွှေရည်တို့ ရဲ့ လူတွေမသိပေးတဲ့ ခိုးစားထားတဲ့ video ထွက်လာပြီ မဖြုတ်ချခင်မြန်မြန်ဝင်ကြည့်ကြ ခဏနေပြန်ဖြုတ်မည်…….ဗွီဒီယိုကြည့်ရန် စာကြောင်းလေးကို နှိပ်ပါ။ ဘုရား …
“ပီတိအပြုံးတွေဝေဆာခဲ့ရတဲ့ညီမလေးရဲ့မင်္ဂလာပွဲ” သရုပ်ဆောင်ကျော်ကျော်ရဲ့ချစ်ရတဲ့ညီမလေးမင်္ဂလာပွဲမှအမှတ်တရပုံရိပ်လေးတွေနဲ့တက်ရောက်လာကြတဲ့အနုပညာရှင်ညီကိုမောင်နှမများရဲ့ပုံရိပ်လေးတွေကိုလဲပရိသတ်တွေအတွက်…. (အပြည့်အစုံဖတ်ရန်ပုံကိုနှိပ်ပါ။)
ပရိသတျအခဈြတျောမငျးသားခြောကြျောကြျောဟာညီမဖွဈသူမင်ျဂလာပှဲလေးမှာပီတိအပွုံးတှနေဲ့ဂုဏျယူမဆုံးဖွဈနတေဲ့အကိုတဈယောကျရဲ့ပုံရိပျတှကေိုမွငျတှခေဲ့ရတာပဲဖွဈပါတယျ။ကြျောကြျောရဲ့ခဈြရတဲ့ညီမလေးရှနျးလဲ့လဲ့ဝဟောနိုဝငျဘာ၎ရကျနမေ့နကေ့Yangon Novotal Max ဟိုတယျမှာမင်ျဂလာပှဲလေးကငျြးပခဲ့တာပဲဖွဈပါတယျ။မင်ျဂလာပှဲလေးကိုပရိသတျအခဈြတျောအနုပညာရှငျညီကိုမောငျနှမမြားစှားလဲတကျရောကျဂုဏျပွုပေးခဲ့တာပဲဖွဈပါတယျ။အကိုကွီးတော့အဖရာဆိုတဲ့အတိုငျးကြျောကြျောဟာညီမလေးရဲ့မင်ျဂလာပှဲလေးမှာဦးဆောငျစီစဉျခဲ့ပွီးဂုဏျယူမဆုံးဖွဈနတေဲ့ညီမလေးရဲ့မင်ျဂလာပှဲမှအမှတျတရပုံရိပျလေးတှကေိုလဲသူရဲ့လူမှုကှနျယကျမှာဝထေားတာပဲဖွဈပါတယျ။ 1 OMG တင်ပါးကြီးတဲ့ မိန်းကလေးတွေကို ယောက်ျားလေးတွေ ကြိုက်တဲ့အကြောင်းရင်း……. မိန်းကလေးတွေနှိပ်ကြည့်လိုက်နော် ယောက်ျားလေးများဝင်မကြည့်ရ……အပြည့်အစုံဖတ်ရန်စာကြောင်းကိုနှိပ်ပါ။ နေတိုးနဲ့ ဝတ်မှုံရွှေရည်တို့ ရဲ့ လူတွေမသိပေးတဲ့ ခိုးစားထားတဲ့ video ထွက်လာပြီ မဖြုတ်ချခင်မြန်မြန်ဝင်ကြည့်ကြ ခဏနေပြန်ဖြုတ်မည်…….ဗွီဒီယိုကြည့်ရန် စာကြောင်းလေးကို နှိပ်ပါ။ ဘုရား ဘုရား မိုးယုစံနဲ့ကောင်းပြည့်တဲ့ ချောင်းသာဟိုတယ်မှာ CCTV နဲ့ဖမ်းမိတဲ့ဗွီဒီယိုဖိုင် …….ဗွီဒီယိုကြည့်ရန် စာကြောင်းလေးကို နှိပ်ပါ။ ဘုရား ဘုရား ပြင်ဦးလွင်ပန်းခြံထဲမှာ အခုလေးတင် ချောင်းရိုက်လာတဲ့ကောင်ချောချောလေးနဲ့ကောင်မလေး…….ဗွီဒီယိုကြည့်ရန် စာကြောင်းလေးကို နှိပ်ပါ။ ဘုရား ဘုရား အောင်ရဲလင်းနဲ့နေခြည်ဦးတဲ့ လုံးဝထင်မထားဘူး…….ဗွီဒီယိုကြည့်ရန် စာကြောင်းလေးကို နှိပ်ပါ။ အမလေး ကောင်းလိုက်တာယောက်ျားရယ်…ဆောင့်ဆောင့် အရမ်းကောင်းနေပြီ….မီးဖိုချောင်မှာ ခလေးတွေမရှိတုန်း ခိုးစားနေကြတာတဲ့…….ဗွီဒီယိုကြည့်ရန် …
Previous 1234567 8910 11 12 13 14 … 49 Next
ဘယျ‌လိုဖွဈ‌ရတာလဲညီထှတျ‌‌ခေါငျ‌ရယျ‌ မငျးသား‌လေးညီထှတျ‌‌ခေါငျ‌တဈ‌ယာကျ‌မကျြ‌နှာမှာဒဏျ‌ရာ အမာရှတျ‌ကွီး‌တှနေဲ့။သူ့ပရိသတျ‌‌တှကေ‌တော့စိုးရိမျ‌တာ‌ပေါ့။ မငျးသား‌လေးဘာဖွဈ‌သှားတာလဲ‌ပေါ့။မငျးသားဆိုတာလညျး ရုပျ‌ရညျ‌‌လေးနဲ့အသကျ‌‌မှေးဝမျး‌ကြောငျးပွုရတာမြိုး‌လေ။ ညီထှတျ‌‌ခေါငျ‌ကိုအမာရှတျ‌‌တှရေ‌အောငျ‌လုပျ‌ထညျ့‌လိုကျ‌တာကပိုငျ‌ဆုဟနျ‌ဆိုတဲ့မိတျ‌ကပျ‌ဆရာမ‌လေးပါတဲ့။တကယျ‌က ညီထှတျ‌‌ခေါငျ‌တဈ‌‌ယောကျ‌အမာရှတျ‌ပုံမိတျ‌ကပျ‌လိမျးထားတာ မိတျ‌ကပျ‌ဆရာမ‌လေးက‌တျော‌လှနျးလို့စဈ‌လို့ထငျ‌‌နရေတာပါတဲ့။စိတျ‌မပူကွနဲ့‌နျော‌ပရိသတျ‌ကွီး။မိတျ‌ကပျ‌တဲ့ဗြို့။ ဘယ်‌လိုဖြစ်‌ရတာလဲညီထွတ်‌‌ခေါင်‌ရယ်‌ မင်းသား‌လေးညီထွတ်‌‌ခေါင်‌တစ်‌ယာက်‌မျက်‌နှာမှာဒဏ်‌ရာ အမာရွတ်‌ကြီး‌တွေနဲ့။သူ့ပရိသတ်‌‌တွေက‌တော့စိုးရိမ်‌တာ‌ပေါ့။ မင်းသား‌လေးဘာဖြစ်‌သွားတာလဲ‌ပေါ့။မင်းသားဆိုတာလည်း ရုပ်‌ရည်‌‌လေးနဲ့အသက်‌‌မွေးဝမ်း‌ကျောင်းပြုရတာမျိုး‌လေ။ ညီထွတ်‌‌ခေါင်‌ကိုအမာရွတ်‌‌တွေရ‌အောင်‌လုပ်‌ထည့်‌လိုက်‌တာကပိုင်‌ဆုဟန်‌ဆိုတဲ့မိတ်‌ကပ်‌ဆရာမ‌လေးပါတဲ့။တကယ်‌က ညီထွတ်‌‌ခေါင်‌တစ်‌‌ယောက်‌အမာရွတ်‌ပုံမိတ်‌ကပ်‌လိမ်းထားတာ မိတ်‌ကပ်‌ဆရာမ‌လေးက‌တော်‌လွန်းလို့စစ်‌လို့ထင်‌‌နေရတာပါတဲ့။စိတ်‌မပူကြနဲ့‌နော်‌ပရိသတ်‌ကြီး။မိတ်‌ကပ်‌တဲ့ဗျို့။
ချစ်သူချောချောလေးကို ထပ်မံထုတ်ပြပြီး ကြွားလိုက်တဲ့ ထွန်းထွန်း….
အဆိုတော်ထွန်းထွန်းကတော့ သူ့ချစ်သူလေးကို Instagram မှာ ထုတ်ကြွားလိုက်ပါတယ်။ထွန်း ထွန်းတစ်ယောက် ချစ်သူရနေပြီဆိုတာကို အစောကြီးတည်းက ပရိသတ်တွေက ရိပ်မိနေခဲ့တာ ကြာ ပါပြီ။နောက်ပိုင်းမှာတော့ ထွန်းထွန်းတင်လိုက်တဲ့ Post တစ်ခုကြောင့် နောက်ပိုင်းမှာတော့ သူ့ချစ် သူ ဘယ်သူဆိုတာကို အားလုံးက ရိပ်မိခဲ့တာပါ။ “တိုက်ဆိုင်တာမဟုတ်တော့ဘူး ဒါ တမင်တကာ လွမ်းတာဖြစ်သွားပီ အယ် လဲ့ လဲ့..” ဆိုတဲ့စာနဲ့အတူ သူ့ဖုန်းရဲ့ screen ပုံကို တင်ခဲ့တာပါ။အဲ့ဒီမှာ ပါတဲ့ မျက်နှာကနေ မှ အားလုံးက သိသွားခဲ့တာပါ။ ချစ်သူနဲ့စုံတွဲပုံတော့ တင်ခဲ့ဖူးပေမယ့် ရုပ်ကိုဖျက်ပြီးတော့တင်ထားတာပါ။ဒီတစ်ခါမှာတော့ ပုဂံကိုအလည် ရောက်နေတဲ့ ချစ်သူရဲ့ ပုံကို တင်ပြီး ထုတ်ပြလိုက်ပါတယ်။ ထွန်းထွန်းရဲ့ ချစ်သူက ပုဂံကို …
Kelvin Kate ကိစ္စနှင့် ပတ်သက်ပြီ ဝေဖန်တာခံနေရတဲ့ ငွေမှုန်၊ ညီအစ်မ နှစ်ယောက်စလုံး အချိုးမပြေဘူးလို့ပြောလာတဲ့ miss ကို ကလေးဆန်စွာ ပြန်လည်တုန့်ပြန်လိုက်တဲ့ ရွှေမှုန်ရတီ
Kelvin Kate ကိစ်စနှငျ့ ပတျသကျပွီး ယခု ရကျပိုငျးမှာတော့ ငှမှေုနျရတီကို သတိထားမိလာကွပါတယျ။ ထိုကိစ်စနှငျ့ ပတျသကျပွီး search myanmar က ငှမှေုနျရတီကို အငျတာဗြူးထားတဲ့ အထဲမှာတော့ Kelvin Kate ဟာ သူမအတှကျ အဈကို တဈယောကျလိုပါဘဲလို့ပွောထားပွီး Kelvin Kate ရဲ့ စျောကွောငျ့ အဲ့ဒီလို မြိုး တငျလိုကျတာပါလို့ပွောထားခဲ့ပါတယျ။ ထို အငျတာဗြူးနှငျ့ ပတျသကျပွီး လူငယျတှကွေားမှာ အသံမြိုးစုံ ထှကျနကွေပါတဲ့ အထဲ မှာ ငှမှေုနျရတီကတော့ Haters Gonna Hate ဆိုပွီး ပွောထားခဲ့ပါတယျ။ ထိုအငျတာဗြူးကို ဖူးပွညျ့ထှနျး ဆိုတဲ့ သူတဈယောကျ က ‘စကားပွောတာကလညျး ငါ့ညီမဆို …
ထွက်နေတဲ့ ကောလဟာလ တွေနှင့် ပတ်သက်ပြီး မိုးယုစံ၏ ခင်ပွန်း ကိုစွမ်းသူပြောပြီ…..
မိုးယုစံ ရဲ့ အတိတျနှငျ့ ပတျသကျပွီးတော့ ကောလဟာလ တှမြေိုးစုံထှကျလာပါတယျ။ မိုးယုစံအား သူတပါးအိမျထောငျကို ဖွိုခှဲခဲ့တယျဆိုပွီး သတငျးမြားစှာထှကျပျေါလာပါတယျ။ ထိုကောလဟာလတှေ သတငျးတှနှေငျ့ ပတျသကျပွီးတော့ မိုးယုစံရဲ့ ခငျပှနျးဖွဈသူကိုစှမျးသူက ယခုလိုမြိုးပွောကွားခဲ့ပါတယျ။ ‘လူတှဟော သူတို့ရဲ့ ဘဝမှာ အခတျအခဲမြိုးစုံ ၊ ကိစ်စမြိုးစုံ ကွုံတှပွေီ့းကွီးပွငျးလာခဲ့ကွတာပါ။ မှားတာတှလေညျးရှိခဲ့သလို၊ မှနျတာတှလေညျးရှိခဲ့မှာပါ။ ဒါပမေယျ့အဲ့ဒီဟာတှဟော အဓိကအခကျြမဟုတျပါဘူး။ ထိုအရာတှဟော ကိုယျ့ရာဇဝငျဖွဈသလို၊ လူတိုငျးက မိမိကောငျးဖို့ အတှကျ မိမိရာဇဝငျကိုရေးခဲ့ကွတာပါဘဲ။ ကြှနျတျောတို့နှဈယောကျအတှကျတော့ မလိုအပျတဲ့ ကောလဟာလတှကေလညျးလှဲရငျ ပိုပွီးကောငျးမှနျတဲ့ ဘဝကို တညျဆောကျနကွေပွီး ကြှနျတျောတို့နှဈယောကျရှဆေ့ကျပွီး လုပျကိုငျဖို့ အစီအစဉျတှမြေားစှာ ခမြှတျထားပွီးပါပွီ။ ကြှနျတျောပွောခငျြတာကတော့ သူနှငျ့ လကျမထပျခငျကတညျးက ကြှနျတျောကိုယျတိုငျအားလုံးကို စုံစမျးပွီးသားပါ။ ထှကျလာတဲ့ ရလပျတိုငျးဟာ …
အကယျဒမီစာရငျးဝငျခဲ့တဲ့ ခိုးဆိုးလုနှိုကျဇာတျကားကို မိုးဟကေိုရဲ့ မိုးရုပျရှငျထုတျလုပျရေးကနေ ရိုကျကူးထုတျလုပျခဲ့ပွီး အောငျမွငျမှုမြားစှာကိုလဲ ရရှိခဲ့ပါတယျ။ ” မိုးရုပျရှငျ ထုတျလုပျရေးက ထုတျလုပျတဲ့ ဇာတျကား တဈကားအနနေဲ့ ဒီကားလေးကို အောငျမွငျစှာ ပွသခငျြတယျ။ ပရိသတျတှရေဲ့ အားပေးမှုကိုလညျး မိုးတို့ထုတျလုပျရေးက အပွညျ့အဝ ရခငျြတယျ။ အဲ့ဒါကွောငျ့ ရုံတငျတဲ့အခါမှာ ငှကွေေးရရှိမှု မြားတာ၊ နညျးတာထကျ၊ ဒီဇာတျကားအပျေါ ပရိသတျတှေ စိတျကနြေပျမှု အပွညျ့အဝ ရတယျဆိုရငျ မိုးတို့ ကွိုးစားရကြိုး နပျပါပွီ။ ဒီကားအပျေါ မိုးတို့ အမြားကွီး မြှျောလငျ့ထားတယျ။ ပရိသတျ တဈယောကျ အနနေဲ့ ခံစားပွီး ကွညျ့ခငျြလှနျးလို့ကို မိုးတို့ ရိုကျခဲ့တာပါ။ ” ဆကျလကျပွီး အနုပညာနဲ့သကျဆိုငျတဲ့ သရုပျဆောငျတာအပွငျ တခွားစီးပှားရေးတှပေါ …
ပရိသတျတှကေ လူပြိုကွီးနတေိုးရယျလျို ခဏခဏချေါနတေဲ့အပျေါ မခံခငျြဖွဈလာပုံရတဲ့နတေိုးကနေ နောကျဆုံးသူ့ရဲ့ခံစားခကျြကို ပှငျ့ပှငျ့လငျးလငျးဖှငျ့ပွောလိုကျပါပွီ။ အနုပညာလောကမှာ ဆယျစုနှဈတဈစုကြျောလာသလို ၀ါလဲရငျ့လာပွီဖွဈတဲ့ အကယျဒမီနတေိုးဟာ ယခုအခြိနျမှာ အောငျမွငျမှုတှမြေားစှာရရှိနပွေီဖွဈသလို သူကငျြလညျရာအနုပညာလောကကို ပွနျလညျကြေးဇူးပွုနိုငျဖို့အတှကျ အစီအစဉျအသဈတှကေိုရေးဆှဲလကျြရှိပါတယျ။ နတေိုးဟာ လှနျခဲ့တဲ့နှဈတှမှော ရုပျရှငျစတူဒီယိုတဈခု တညျထောငျမယျလို့ပွောကွားခဲ့ပွီး လကျရှိမှာလဲ လူငယျဒါရိုကျတာအသဈတှနေဲ့အတူ လကျတှဲရိုကျကူးလကျြရှိပါတယျ။ နတေိုးနဲ့ပွိုငျဘကျမငျးသားတဈလကျဖွဈတဲ့ ပွတေီဦးဟာ လကျရှိမှာ အိမျထောငျကနြပွေီဖွဈသလို ရှယျတူအနုပညာရှငျတှကေလဲ အသီးသီးအိမျထောငျပွုခဲ့ကွပွီဖွဈပါတယျ။ ဒါနဲ့ပတျသတျပွီးနတေိုးကနေ လကျရှိသူ့ရဲ့အသကျအရှယျဟာ အိမျထောငျပွုသငျ့တဲ့အရှယျရျောုနပွေီဖွဈတာကို သတိပွုမိကွောငျး၊ တဈခြိနျခြိနျမှာ အိမျထောငျပွုဖွဈမှာဖွဈကွောငျး ပွောကွားခဲ့ပါတယျ။ လကျရှိမှာတော့ အလုပျကိုသာအာရုံစိုကျထားပွီး မင်ျဂလာသတငျးအတှကျကိုတော့ သခြောမပွောနိုငျသေးကွောငျး ပွောဆိုခဲ့ပါတယျ။ ပရိသတ်တွေက လူပျိုကြီးနေတိုးရယ်လို ခဏခဏခေါ်နေတဲ့အပေါ် မခံချင်ဖြစ်လာပုံရတဲ့နေတိုးကနေ နောက်ဆုံးသူ့ရဲ့ခံစားချက်ကို ပွင့်ပွင့်လင်းလင်းဖွင့်ပြောလိုက်ပါပြီ။ အနုပညာလောကမှာ ဆယ်စုနှစ်တစ်စုကျော်လာသလို ၀ါလဲရင့်လာပြီဖြစ်တဲ့ အကယ်ဒမီနေတိုးဟာ …
ဗိုလ်အောင်ဒင်ထက် ပေါက်သွားတဲ့ ချမ်းချမ်း ၊ ဘုဏ်းသိုက် ၊ ရွှေပိုးအိမ်တိုရဲ့ ဇာတ်သိမ်း
ဘုဏ်းသိုက်နဲ့ ရွှေပိုးအိမ်နဲ့ ဘာပြုလို့ဆိုလား.. ချမ်းချမ်းက သတင်းစာထဲကနေ ကွာရှင်းလိုက်တယ်တဲ့။ အဲဒါနဲ့ ရွှေပိုးအိမ်ကို “စနိုက်ကြော်မ.. ဘာညာ” နဲ့ ဝိုင်းဆဲကြပါလေရော။ ရွှေပိုးအိမ်လည်း မခံနိုင်တော့အဆုံး သူနဲ့ ဘုန်းသိုက် ဘာမှမပြုကြောင်း ဖွဘုတ်ကနေ ဖြေရှင်းတယ်။ ဒါဆို ချမ်းချမ်း ပလီတာနေမှာ ဆိုပြီး ချမ်းချမ်း ဝိုင်းဆဲ။ ချမ်းချမ်းကလည်း သူ မပလီကြောင်း အင်တာဗျူးမှာ ငိုကြီးချက်မနဲ့ဖြေရှင်းတော့ .. ဘယ်သူ့ဆဲလို့ ဆဲရမှန်း မသိဘဲ ရုတ်တရက် ကြောင်သွားတယ်။ ပြီးတော့မှ တကယ်ဆဲရမှာက ဘုဏ်းသိုက် .. ဆိုပြီး ဘုဏ်းသိုက်ကြီး ဝိုင်းဆဲကြပါလေရော့.. ဘုဏ်းသိုက်ကလည်း အင်တာဗျူး မှာ ရှင်းတယ်။ အင်း.. ဘုဏ်းသိုက် ဆိုတာ …
အောင်လအန်ဆန်းကို စိန်ခေါ်ပြီး ထိုးသတ်သွားမည့် ကရင်ပြည်နည်က ရွှေခါးပါတ်ချန်ပီယံ စောဇင်ထွန်း
မ​နေ့ညက ​အောင်​လ နိုင်​ပွဲနဲ့ပက်​သက်​ပြီးအငြင်းပွားဖွယ်​ရာ​တွေဖြစ်ခဲ့ကြကာ ထိုပွဲနှင့်ပက်သက်၍ အောင်လအန်ဆန်းကို မကျေနပ် ဖြစ်နေတဲ့ ကရင်​ပြည်​နယ်​က ​စောဇင်​ထွန်းမှ ​အောင်​လကိုထပ်​မံ၍စိန်​​ခေါ်ပြီး စာဇင်​ထွန်းမှ​ အောင်​လကို ရှုံးနိမ့်​ခဲ့ပါက တစ်​သက်​လုံးလက်​​ဝှေ့မစား​တော့ပါဟူ၍7Day news ကို​ပြောကြားခဲ့သည်။ “ဒီကောင်က လုပ်ပွဲတွေများနေပြီဗျ ကျွန်တော် သည်းမခံနိုင်တော့ဘူး။ ဒီကောင်လုပ်ရပ်တွေ များနေပြီလေ။ ယခု ဒီအကောင်နဲ့ April 28 နေ့ရက်​မှာ မိုးလုံ​လေလုံအားကစားကွင်းမှာ ထိုးသတ်ကြမှာပါ။ ဒီအကောင် အနေနဲ့ ကျွန်တော်ကို ကြောက်လို့ ရှောင်နေမယ်ဆိုရင်တောင် အမေရိကန်နိုင်ငံအထိ လိုက်သွားပြီး မတွေ့ တွေ့အောင် ရှာဖွေ ထိုးသတ်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်။” ဟူ၍ ကရင်ပြည်နယ် ရွှေခါးပါတ် ချန်ပီယံ စောဇင်ထွန်းက ဆိုသည်။ သူအ​နေနဲ့လုပ်​ပွဲများကိုမုန်းတယ်​ဟူ၍လည်း​ပြောကြားခဲ့သည်​။ …